टेकु अस्पतालमा रहेका दूई जना कोरोना संक्रमितको अवस्था कस्तो छ ? – Globalpatrika
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यटेकु अस्पतालमा रहेका दूई जना कोरोना संक्रमितको अवस्था कस्तो छ ?
टेकु अस्पतालमा रहेका दूई जना कोरोना संक्रमितको अवस्था कस्तो छ ?
फ्रान्सबाट फर्केकी १९ वर्षीया कोरोना संक्रमित युवती टेकु अस्पतालमा भर्ना भएको १९ दिन भयो। पहिलोपटक संक्रमण देखिए लगत्तै उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।
टेकु अस्पतालमै युएईबाट आएका धादिङका अर्का कोरोना संक्रमित युवक पनि उपचाररत छन्। उनलाई पनि चैत १२ गते अस्पताल भर्ना गरिएको हो। १५ दिन बितिसक्दा पनि दुबै जना निको भएर घर जान सकेका छैनन्।
‘उहाँहरू दुबैमा थोरै खोकी छ। लक्षण हटेपछि परीक्षण गर्छौं। अर्को हप्तालाई तयारी गर्दैछौं,’ विरामीको उपचारमा खटिएका एक चिकित्सकले भने। केही दिनअघि दुबै संक्रमितको दोस्रो परीक्षण गरिएकोमा दुबैको नतिजा पोजिटिभ देखिएको थियो। नतिजा पोजेटिभ आएसँगै दुबै संक्रमितको अस्पताल बसाई लम्बिएको हो।
बिरामीमा पूर्ण रूपमा लक्षण नहराएसम्म डिस्चार्ज गर्न नमिल्ने अस्पतालले जनाएको छ। ‘डिस्चार्ज गर्नलाई लक्षण नभएको २४ घन्टाभित्र स्वाबको दुई पटक परीक्षण गर्नपर्छ र ती दुबै परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आउनुपर्छ,’ ती चिकित्सकले भने।
उनका अनुसार परिवारका सदस्य र छिमेकीलाई संक्रमण नसरोस् भनेर अस्पतालले दुई पटक परीक्षण गर्ने गर्छ। उनले दुबै संक्रमितमा अलिकति खोकीबाहेक सबै सामान्य रहेको बताए। संक्रमितमा खोकी हटेपछि अस्पतालले परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ।
‘त्यसको लागि अलिकति समय लागछ। अर्को हप्ता गुड न्युज आउँछ होला,’ उनले भने। संक्रमितकै उपचारमा खटिएका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘कहिलेकाही यो भाइरस शरीरमा २४ दिनसम्म बस्न सक्छ। भाइरस हुँदाहुँदै बिरामीलाई डिस्जार्च गर्न मिल्दैन।’
अहिले बिरामीलाई जाँच गर्न बिहान १० बजे चिकित्सकको टोली जाने गर्छ। उनले बिरामीमा खोकी भएकाले छातीमा निमोनिया छ/छैन जाँच गर्ने र अरू समस्या के छ भनेर सोध्ने गरेको बताए। अस्पतालले फोनबाट पनि बिरामीको जानकारी लिइरहेको जनाएको छ।
‘बिरामीसँग गफ पनि हुन्छ। उहाँहरू दुबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ,’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘तपाईंलाई खोकी भएकाले केही दिनपछि परीक्षण गर्छौं भन्छौं उहाँहरूले मज्जाले हुन्छ भन्नुहुन्छ।’बिरामीहरूको परिवारका सदस्यसँग नियमित कुरा भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। दुबै बिरामीलाई अस्पतालले नै खाना र खाजाको व्यवस्था गरेको छ।
‘कहिलेकाहीँ हामीलाई बाहिरबाट मःम खाजा आउँछ, उहाँहरूलाई त्यो पनि दिन्छौं,’ ती चिकित्सकले भने।
सरकारले फ्रान्सबाट फर्केकी १९ वर्षीया युवतीमा कोरोना संक्रमण देखिएको भोलिपल्ट लकडाउनको घोषणा गरेको हो।